Sida mashiinka dharka loogu dhaqo talaabo talaabo ah | Bezzia
Sida loo nadiifiyo mashiinka dharka talaabo talaabo
Tony Torres | | Guriga
Mid ka mid ah qalabka dayacan ee dayactirka waa mashiinka dharka lagu dhaqo. Waa macquul inaan ogaado xaqiiqda taas maaddaama ay tahay cunsur nadiif ah, iyada lafteeda ayaa nadiif looga dhigaa. Laakiin waxba kama jiraan xaqiiqda, mashiinka dharka lagu dhaqo ayaa hadhaaga maryaha, biyaha fadhiista iyo dhammaan noocyada qashinka ayaa uruursan oo xitaa sun noqon kara.
Sidaa darteed, waa muhiim in aad nadiifiso mashiinka dharka marba marka ka dambaysa talaabo talaabo talaabo ah. Sidan oo kale, dharkaagu wuxuu u soo bixi doonaa si nadiif ah oo nadiif ah waxaadna kordhin kartaa nolosha mashiinka dharkaaga. Alaab dabiici ah oo laga yaabo inaad horey ugu haysatay gurigaaga iyo qaab fudud oo fudud, waxaad haysan doontaa qalab kaamil ah muddo dheer. Ma rabtaa inaad ogaato sida loo nadiifiyo mashiinka dharka lagu dhaqo? Tani waa tallaabo tallaabo. Sidoo kale ha moogaanin kuwan nadaafadda nadiifinta.
1 Immisa jeer ayaa lagu talinayaa in la nadiifiyo mashiinka dharka lagu dhaqo?
1.1 Tallaabo tallaabo
Immisa jeer ayaa lagu talinayaa in la nadiifiyo mashiinka dharka lagu dhaqo?
Si looga fogaado qashinka iyo biyaha taagan waxay sameysmaan fangas iyo bakteeriyo kale Geesaha mashiinka dharkaaga, waxaa lagugula talinayaa inaad si fiican u nadiifiso 3dii ama 4tii biloodba mar. Sidan, way fududaan doontaa oo way fududaan doontaa in la nadiifiyo iyada oo aan waqti badan la qaadan. Dhinaca kale, biyo urursiga ayaa dhaawici kara taayirrada ku dhex jira mashiinka dharka lagu dhaqo, iyadoo abuureysa fangaska iyo bakteeriyada kale ee ay adag tahay in laga soo saaro. Nadiifinta nadiifinta dhowrkii biloodba mar ayaa ka hortagi doonta tan.
Alaabada aad u baahan doonto inaad ku nadiifiso mashiinka dharka lagu dhaqo ayaa ah khal khal nadiif ah, soodhaha iyo biyaha. Sida maacuunta, waxaad u baahan doontaa oo keliya maro cudbi ah iyo caday duug ah. Marka qalabka la diyaariyo, waxaan ku bilaabaynaa nadiifinta mashiinka dharka lagu dhaqo.
Marka hore waa inaan nadiifinnaa miiraha mashiinka dharka lagu dhaqo. Qeybta hoose waxaad ka heli doontaa istaag, waxaad dhigtaa shukumaanno duug ah sagxadda maxaa yeelay biyaha fadhiya ayaa soo bixi doona. Ku nadiifi daboolka biyo diirran, haddii loo baahdo isticmaal jikada wax lagu baaro. Masax gudaha bulaacada kana saari qashinka urursan. Furka daboolka ku celi.
Ka qaad khaanadda dharka lagu dhaqo. La soo bax sanduuqa balaastigga ah kuna nadiifi suufka wax lagu baaro, biyo diirran, iyo weelka weelka lagu dhaqo. Ku qallaji warqad wax nuugaysa. Ku nadiifi godka sanduuqa maro qoyan, sidoo kale waxaan ka saareynaa raadadka waxyaabaha lagu nadiifiyo in la ururiyey.
Nadiifinta Taayirada. Si tan loo sameeyo, waxaan isku dari doonnaa koob oo ah khal khal nadiif ah iyo nus koob oo soodhaha ah. Marka hore waxaan u soconaa ka saar biyaha fadhiya shaabadaha caagga ah maro leh. Hadda, buraashka cadayga, waxaan ku xoqeynaa isku darka lagu sameeyay meelaha ay ka muuqdeen nabarrada madow. Hadday nabarradu sii socdaan, mari isku-darka oo ha ku dhaqmaan daqiiqado ka hor intaanad ku celin hawsha.
Nadiifi durbaanka. Si aan u nadiifino durbaanka waxaan dhigeynaa koob oo khal khal ah weelka saabuunta lagu dhaqo. Waxaan xirnaa mashiinka dharka lagu dhaqo iyo waxaan ku dhejineynaa wareejin caadi ah biyo kulul. Markuu meertadu dhammaato, waxaan ku tirtirnaa gudaha durbaanka maro qoyan oo waxaan uga tagnaa albaabka mid furan inuu qallalo gebi ahaanba.
Banaanka. Waxaa hadhsan oo kaliya in la nadiifiyo banaanka iyo albaabka mashiinka dharka lagu dhaqo. Si tan loo sameeyo, ku qas biyo diirran koob khal khal cad ah baaquli. Adeegso maro iyo si fiican u nadiifi banaanka, marka lagu daro albaabka qaybta gudaha iyo dibaddaba.
Si looga hortago in wasakhda ka soo baxda mashiinnada dharka lagu dhaqo, waa muhiim ka tag albaabka furan markasta oo la maydho. Oggolaashaha gudaha qasaaladda si ay gebi ahaanba u qalajiso waa habka ugu wanaagsan ee looga ilaalin karo caaryada iyo bakteeriyada kale. Samaynta nadiifin dhammaystiran 3-dii ilaa 4-tii biloodba mar ayaa kaa caawin doonta inaad haysato mashiinka dharka lagu nadiifiyo oo nadiif ah. Maxaa ka dhigaya dharkaaga inuu u soo baxo mid nadiif ah, oo leh ur fiican oo jeermis disha.
Haddii aad ogaatay in waayahaan dambe dharkaagu ay u soo baxayaan si nadiif ah ama uraya urka mashiinka dharka lagu dhaqo, waa digniin ka timid qalabkaaga. Nadiifinta wanaagsan ee dhammaan walxaha mashiinka dharkaaga lagu dhaqdo xallin doonta dhibaatada si dhakhso leh, fudud oo leh alaab deegaanka u habboon.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Guriga » Sida loo nadiifiyo mashiinka dharka talaabo talaabo
4 Filim oo ku saleysan sheeko run ah Waa inaad ku aragtaa Filmin
Cunnooyinka kaa caawinaya inaad hoos u dhigto kolestaroolka